News | सचिवालय बैठक
News | Tag: सचिवालय बैठक
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको बैठक प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा सुरु भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी भएका छन् । यसअघि बसेको बैठकमा उनी अनुपस्थित भएका थिए ।
नेकपा सचिवालय बैठकः ओली समूह अन्तिम समयसम्म पनि बैठक रोक्ने प्रयासमा
भनिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक बस्ने/नबस्नेबारे हालसम्म अनिश्चित बनेको छ । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बुधबार बसेको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि अर्का अध्यष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन दिनको लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
ओलीसहितको नेकपा सचिवालय बैठक सुरु
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरुको उपस्थितिमा सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको हा ।
नेकपा सचिवालय बैठकमा आज पनि कडा सवाल–जवाफ !
काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्न लागेको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाएको आरोपको कडा तरिकाले जवाफ दिने तयारी गरेका छन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज (मंगलबार) दिउँसो १ बजे नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्दैछ ।
नेकपा सचिवालय बैठक आज, कस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी ?
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक आज (शनिबार) बस्दैछ । बैठकका लागि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाएका आरोपबारे लिखित जवाफ तयार गरेका छन् ।
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक भोली शनिबार बस्दैछ । तर, पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकपछि भेटवार्ता नै भएको छैन । यसअघि पार्टीमा विवाद देखिँदा अध्यक्षद्वय अन्य नेताहरु सहमतिको लागि जुट्ने गरेको भए पनि पछिल्लो बैठकपछि भने छलफलहरु बन्दजस्तै भएका छन् ।
सघन परामर्शमा ओली, अधिकांश नेताद्वारा बैठकको सामना गर्न सुझाव
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो केही दिनयता सघन परामर्शमा जुटेका छन् । गत शुक्रबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यशैली र चिन्तनपद्धतीको आलोचना गर्दै लिखित रुपमा प्रस्ताव पेश गरेपछि ओलीले आफू निटक तथा आफूविरुद्धका नेतासँग छलफल जारी राखेका छन् ।
नेकपा सचिवालय बैठकपछि बालुवाटारमा यी ६ नेताबीच छलफल
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको शुक्रबारको सचिवालय बैठक सकिएपछि ६ नेताहरुबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसहित ६ नेताहरुबीच सचिवालय बैठक सकिएपछि छलफल सुरु भएको हो ।
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सकिएको छ । आगामी बैठकको एजेण्डा तय गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक सकिएको हो ।